Karaoke tsy OK namonoana olona iray - Clashinfo du 27 janvier 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Clash info Karaoke tsy OK namonoana olona iray – Clashinfo du 27 janvier 2019
Tsy hita intsony izay iainana re olona marina mafy, na manao karaoke aza mety mahafaty. Tovolahy iray no nisy nanapitra ny aina, fa namalan-kira tamin’ny karaoke hono ingahy rainy. Teny Namontana no niseho ny action, samy misafidy ny hirany moa izany ny client. Ary izay no nataon’izy 4 mirahalahy mpinamana kinanjo nisy nanao ilay hira sady nivalana. Ka hoy aho hoe miatomboka ny vava ny ady, nifamaly niafarany nivoaka ny vavahady. Hira sendra nitovy, karaoke nivalana no hanongotana ain’olona ve lesy ry namana. Efa tamin’ny Novembre no nitranga ny loza, tamin’ny alatsinainy izy 4 no vaosambotra kosa. Efa nihidy daholo ny karaoke teto an-tanana raha toa ka ny olona mahay hira ihany no makany.
23 janvier, 12:35 ·
FIFAMALIANA TAO ANATY KARAOKE: OLONA 01 NAMOY NY AINY, 04 NO VOASAMBOTRY NY POLISIN’NY BC.
Fifandrangitana tao anaty “karaoke” tetsy Namontana no nahatonga ny ady teo amin’ireo lehilahy tonga niala voly tao amin’io toerana voalaza etsy ambony io. Nisy ny fifandirana teo amin’ireto tovolahy ireto rehefa samy nitovy ny hira nataon’izy ireo ka nilazan’ireo tovolahy miisa 04 fa tsy mahay mihira ilay lehilahy nihira ny hira nataon’ ireto farany. Raikitra ny fifamaliana ka nitohy tany ivelan’ilay toerana fanaovana karaoke izany. Nohenjehin’ireto efa-dahy ilay lehilahy sy ny namany iray izay nifamaly tamin’izy ireo tao anaty “karaoke” ka tratra ny lehilahy 01 nifamaly tamin’izy ireo ary nodarohiny. Noho ny vono sy ratra nahazo ity voadaroka dia tsy tana ny ainy rehefa tonga teny amin’ny HJRA ny alin’io alahady faha 11 novambra. Nokarohina araka izany ireo nahavanon-doza ka ny Sabotsy faha 19 janoary 2019 no voasambotra teo Anosy ny iray tamin’izy ireo. Ity voasambotra ity indray avy eo no nanoro ireo trano nitoeran’ireo telo lahy namany. Voasambotra avokoa izy efa-dahy ny alatsinainy 21 janoary 2019 ary niaiky ny heloka nataony. Nampidirina am-ponja vonjimaika eny Antanimora moa izy efa-dahy ireo.
Article précédentÊtre à la hauteur de la Ministre de la justice malgache sortante Harimisa Norovololona Razafindrakoto dont le passage a été salutaire pour les justiciables et la justice La gazette de la grande île du 26 janvier 2019
Article suivantLes ministres malgaches nouvellement nommés signent un code de bonne conduite – Expressmada du 28 janvier 2018